होनरको तीन नयाँ स्मार्टफोन नेपाली बजारमा, कति छ मूल्य ? - Aarthiknews
होनरको तीन नयाँ स्मार्टफोन नेपाली बजारमा, कति छ मूल्य ?
काठमाडौं । नेपाली बजारमा होनर ब्राण्डको तीन फरक मोडलका स्मार्टफोन सार्वजनिक भएको छ । नेपालका लागि होनरको आधिकारिक बिक्रेता सेल्ट्रन नेपाल प्रालिले होनर एक्स७, एक्स८ र एक्स९ बाजारमा ल्याउन लागेको हो ।
होनर एक्स७ मा रहेको असाधारण पाँच हजार एमएएच ब्याट्रीले प्रयोगकर्ताहरूलाई एकै चार्जमा २० घण्टासम्म अनलाइन भिडियो स्ट्रिमिङ वा द्धढ घण्टा फोन कलको सुविधा दिन्छ । होनरको शक्तिशाली टेक्नोलोजीले विश्वव्यापी स्मार्टफोन प्रयोगकर्ताहरूको लागी, होनर एक्स७ मा २२.५ वाट होनर एक्स७ वायर्ड सुपरचार्ज सुविधा दिन्छ गर्दछ।
अविश्वसनीय रूपमा पातलो र स्टाइलिश होनर एक्स८ अल्ट्रा स्लिम र हल्का वजनको साथ डिजाइन गरिएको छ । फ्ल्याट एज डिजाइन र चारै तर्फ गोलाकार कुनाहरूले गर्दा होनर एक्स८ एक हातको हत्केलामा आरामसँग फिट हुन्छ । प्रयोगकर्ताहरूलाई तौल नहुने सुनिश्चित गर्दै साना ह्यान्डब्यागहरू र खल्तीहरूमा सजिलैसँग राख्न सकिन्छ।
४८ हजार एमएएच लामो समयसम्म चल्ने ब्याट्रीले भरिएको होनर एक्स९ ले १३.७ घन्टासम्मको सामाजिक सञ्जाल अन्वेषण, १६.३ घण्टा भिडियो एप प्रयोग वा २५.६ घण्टा कलहरू, सबै एकल चार्जमा प्रदान गर्दछ । जुन आफ्नो शक्तिको लागि ब्याट्री कार्यसम्पादनको आवश्यकताका लागि उपयुक्त छ ।
होनर एक्स७को मूल्य २४ हजार ९९० रुपैयाँ पर्नेछ भने होनर एक्स८ को मूल्य २९ हजार ९९० रुपैयाँ र एक्स८ होनर एक्स९ ३९ हजार ४९० रुपैयाँ पर्ने कम्पनीले जनाएको छ ।